Joba 8 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
8 Ary namaly i Bildada Sohita+ hoe: 2 “Mandra-pahoviana ianao no hiteniteny toy izany,+Nefa rediredy* fotsiny ny teny aloaky ny vavanao?+ 3 Andriamanitra ve dia hamadika ny rariny?+Ary ilay Mahery Indrindra ve dia hanao ny tsy rariny?+ 4 Raha nanota taminy ny zanakao,Dia avelany hizaka ny vokatry ny fikomiany izy ireo. 5 Raha mitady an’Andriamanitra ianao,+Sady mitalaho famindram-po amin’ilay Mahery Indrindra, 6 Ary raha madio sy marina ianao,+Dia ho efa nifoha hamonjy anao izy,Ka ho efa naveriny tamin’ny laoniny ny fonenan’ny fahamarinanao. 7 Ary na kely aza no niandohanao,Dia ho lehibe kosa no hiafaranao.+ 8 Mba anontanio tokoa ange ny olona taloha e,+Ary mifantoha amin’izay efa nodinihin’ireo razany!+ 9 Fa vao omaly isika,+ ka tsy mahalala na inona na inona,Satria aloka ihany ny androntsika eto an-tany.+ 10 Tsy hampianatra anao ve izy ireo ka hilaza aminao,Ary hamoaka teny avy ao am-pony? 11 Haniry tsara ve ny zozoro+ raha tsy eny amin’ny heniheny?Ary haniry tsara ve ny bararata raha tsy misy rano? 12 Mbola tanora sy tsy voatapaka akory izy,Nefa ho maina alohan’ny ahitra hafa rehetra.+ 13 Toy izany koa no hiafaran’ny fiainan’izay rehetra manadino an’Andriamanitra.+Ary ho foana ny fanantenan’ny mpivadi-pinoana.+ 14 Levona koa ny tokiny,Ary tranon-kala no ianteherany.+ 15 Hiankina amin’ny tranony izy, nefa hianjera izany,Hamikitra amin’izany izy, nefa tsy haharitra izany. 16 Maniry tsara izy azon’ny masoandro,Ary misandrahaka ao amin’ny zaridaina misy azy.+ 17 Mifamatopatotra eo amin’ny antontam-bato ny fakany,Ary mijery trano vato izy. 18 Raha misy manongotra anefa izy,+Dia handa azy ilay toerana nisy azy, ka hanao hoe: ‘Mbola tsy nahita anao mihitsy aho.’+ 19 Ho levona toy izany ny fiainany,+Ary hisy hafa indray hitsimoka avy eo amin’ny vovoka. 20 Fa tsy hanary ny tsy manan-tsiny Andriamanitra,Sady tsy hitantana ny mpanao ratsy. 21 Amin’ny farany dia hofenoiny hehy ny vavanao,Ary hofenoiny horakora-pifaliana ny molotrao. 22 Hitafy henatra izay mankahala anao,+Ary ho levona ny tranolain’ny ratsy fanahy.”
^ Na: “rivotra mifofofofo.”